Barattoonniifi maatiin yuunvarsiitii naannoo biraatti barachuu ni yaaddofna jedhu - BBC News Afaan Oromoo
Boqonnaa gannaa kan ji'a lamaatiin booda yeroon dhaabileen barnoota ol-aanoo Itoophiyaa, barattoota simatan ga'eera. Haalli nageenyaaa bara darbee, sirna baruufi barsiisuu yaaddessaa taasisee ture.
Barana hoo? Barattoota, maatii barattootaa, aanga'oota yuunvarsiitotaafi ministeera barnootaa dubbisnee turre.
Sodaa barattootaafi maatiin qaban kan Ministeerri Barnootaa akkamitti akka ilaaluu gaafanneef deeebiin nuuf kennan ministeerri barnootaa yaaddoon nageenyaa hin jiruudha.
Ministeera Barnootaatti Itti-gaafatamaa Kutaa Dhimma Dhaabbileen barnootaa Ol-aanoo Dr. Saamu'eel Kifilee, bara darbe akka biyyaatti haalli keessa turre beekamaadha. Barattoota qofaa osoo hin taane maatiinillee ijoollee isaanii gara yuunvarsiitota naannoo isaaniitiin ala jirutti erguudhaaf yaadda'aa turan, jedhan.
Barattoonni yuunvarsiitii gara garaati baratan soda rakkoo nageenyaan walqabateen qe'eerraa fagaatanii gara bakka itti ramadamanii deemuu sodaachaa jiru.
Barataa Lameessaaa Takkalaa muuxannoo rakkoo nageenyaa Naannoo Sumaalee bara darbe tureen Yuunvarsiitii Jigjigaarraa baqatan kan yaadatu dubbata.
Amma Yuunvarsiitii Jimmaatti ramadamee mediicinii waggaa 3 barataa kan jiru Lameessaan, barattoonni qalbii guutuudhaan barnoota isaaniirra ta'uudhaaf nageenya mirkanaa'aa qabaachuufii qaba jedha.
"Barumsi ofumaanuu yaaddoo qaba. Kanaraatti yeroo nageenyi hin jiraanne ammoo haalaan hammaata. Kanaaf, nagaan barattootaaf hunda dura eegamuuf qaba. Barattoonni yeroo mooraa itti baratan keessaa dhimma qabaatanii, fakkeenyaaf mana baankii deeman of eeggachuu qabu," jechuun ibsa bartaaa Lammeessaan.
Yaaddoon kun bara kanas yuunvarsiitota gara gara garaa keessa ni jiraata jedhanii barattoonni sodaa qaban dubbachaa jiru.
Barattoonni Naannoo Tigiraay fakkeenyaaf yuunvarsiitota naannichaan alatti argaman deemanii barachuuf sodaa nageenyaa qabna jechuudhaan sodaa qaban hiriira ba'anii ibsachaa turan.
Hiriira ba'uu baatanis barattoonni naannoo biroo keessa jiranis yaaddoo walfakkaatu qabu. Barataa Beqaaluu Sandaafaa Finfinneerraa qabxii ittiin yunvarsiitii seenan fidatee bakka itti ramadamu eeggachaa jira. Bakka ramadame hunda ni deemtaa gaaffii jedhuuf, "Yeroo ammaa jeequmsi jira jedhamee bakka dhaga'amaa jiruun ala yoo ta'e nan deema" jedhe.
Yoo ani tole jedhellee maatiin kan fudhatan natti hin fakkaatu. Keessattuu haadhakoo baayyee dhipphisa jedha Baqaaluun. "Isheen innumaattuu akka ani asuma Finfinnee ta'uuf barbaaddi. Yookaan ammoo Jimma akkan deemu barbaaddi. Gara yuunvarsitii biraa akkan deemu hin feetu."
Barattoonni Yunivarsiitii Miizaan Teeppii mormiirra jiru
Maatiin barattootaas yaaddoo nageenyaa jiraachuu mala kan jedhuun ijoollee gara yuunvarsiitiitti erguu sodaachuu dubbatu. "Bara darbe yaaddoorra turre. Amma ammoo yeroon itti erginu waan dhiyaateef, maal akkan godhu anaan natti bitaacha'eera," jedha Obbo Salamoon Yohaannis Finfinneerraa kan hin talli isaa Yuunvarsiitii Maqaleeti barattu.
Hintalli isaa waggaa sadaffaa waan barattuufi, bara kana waan eebbifamtuufis deemu malee isaan jechaa jirtus innni garuu waan gochuuf jiru akka hin beekne duubbata. "Erguuniyyu garaa itti jabaachuudha."
Akkuma kana soda nageenyaa barattoonni qaban kana hir'isuuf yuunvarsiitoonni qophii akkamii akka taasisaa jiran baruufis aanga'oota Yuunvarsiitota Gondar, Wallaggaa, Dillaafi Maqalee dubbisnee turre.
Pirezedaantiin Itti-aanaa Yuunvarsiitii Wallaggaa Dr. Dunkaanaa Nugusee, mooraawwan yuunvarsiiticha jala jiran kan Shaambuu, Gimbiifi isa guddicha Naqamtee dabalatee hunda keessatti nageeni amansiisaan jira jedhan.
Akka Dr. Dunkaanaa jedhanitti baratoonni biyyattii keessaa eessaayyu dhufan simachuuf qophoofneerra jedhan. "Naannoo keenya baayyee naga qabeessaadha. Eegumsi cimaanis barattoota keenyaaf sirriitti taasifama," jedhu.
Barattootni Itoophiyaa Hinditti barachaa jiran rakkoo hamaaf saaxilamne jedhan
Bakka jireenyaafi nyaata barattootaa sirriitti dhiyeessuutti dabalatee nageenya isaaniifis dhimmanii akka hojjetan dubbataniiru. Keessattuu barattoota haaraa gara Yuunvarsiittii Wallagaa dhufaniif hanga Finfinneetti geejjiba erganii akka simatan kaasaniiru, Dr. Dunkaanaan.
Akka Dr. Saamu'eel, bara kana garuu waanti jijjiirame ni jiraata jennee yaadna. Kanaafis sababiin guddaan, akka biyyaatti ammallee waanti hojjechuun nurra jiraatu akkuma jirutti ta'ee, nagaan bu'aa jira jedhan.
"Darbee darbee rakkoon tokko tokko uumamuu danda'u. Kana garuu uummanni mootummaa waliin ta'uun ni fura".
Barattoonni garuu gara yuunvarsiitii itti ramadamaniitti ergamu, jedhan Dr. Saamu'eel.
"Waanti baayyee isaan yaaddessu hin jiraatu. Mootummaanis humni nageenyaas kan barattoota qofaa osoo hin taane nagaa uummata hundaa sadarkaa eegsisuu danda'urratti argama. Kanaaf, barattoonni keenya soda tokkollee isaan keessatti uumamuu hin qabu."
Yunivarsiitii Miizaan Teeppiitti sababa dirqiin gudeeduun mormiin babal'achaa jira